Fanampiana avy amin’ireo Barea Misy azo ianarana tsara
Nanome an-kitsim-po i Faneva Ima. Tsy latsa-danja tamin’izany ihany koa ny an’i Adrien Melvin.
Ny faran’ny herinandro teo koa moa no nahatonga ny fanampiany ho an’ireo mpiray tanindrazana aminy ireo mpilalao hafa toa an-dry Abel Anicet sy Ibrahim Amada. Na dia tsy mpanao politika sy mpitondra firenena aza ireto mpilalao eo anivon’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra ireto dia hita ho misy azo ianarana tsara ny nataony ka hatramin’ny fomba fitsinjarana ireo fanampiana avy amin’izy ireo. Ny an’i Anicet, ohatra, dia avy hatrany dia navantany tany amin’ireo fokontany nahabe azy toy ny eny Antsahameva sy La reunion kely izay voatsirambin’ny tanany ka ny olona akaiky azy izay heveriny fa efa mahafantatra ireo tena mila fanampiana ao an-tanana no nampandraiketiny ny fizarana. Ny tenany moa monina sy milalao any Bolgaria ka tsy afaka hisahana izay fanaraha-maso izay. Ho an’i Ibrahim Amada, izay milalao atsy amin’ny Al Khor Sport ao Quatar kosa dia ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy ao Ambohitrakely, izay tanana nahabe azy koa, no nampandraiketany ny fizahana ireo tena sahirana sy mila ampiana ao amin’ity fokontany ity. Nomena “Ticket” isan-tokantrano izy ireny ny zoma dia mandeha ho azy fotsiny avy eo ny fizarana fanampiana ny sabotsy. Tsy nisy fanadihadiana lava be sy fampintaniana andro vahoaka mandra-paharivan’ny andro fa ora iray raha lava indrindra dia efa vita ny fizarana.